Ogaden News Agency (ONA) – Oslo: Kullan deg deh ah oo ay yeesheen Xubnaha Jaaliyadda Norway.
Oslo: Kullan deg deh ah oo ay yeesheen Xubnaha Jaaliyadda Norway.
Waxaa ka dhacay wadanka Norway caasimadiisa Oslo, shirkii xubnaha Jaaliyadda Soomaalida Ogadenya ee ku dhaqan Oslo iyo nawaaxigeeda oo laga soo horumariyey wakhtigisii.
Shirkan oo aayado kamid ah Quraanka kariim ah lagu furay, ayaa waxa lagu soo bandhigay hawlihii maamulka qabteen sanadkii ay soo jireen, middaas oo si wanaagsan xubnuhu isula soo qaadeen qaabka la xisaabtanka Maamulka.
Kullankan oo laga soo horumariyey wakhtigisii ayna soo xaadireen xubno badan oo lafdhabar u ah Jaaliyadda ayaa lagaga wada hadlay qodobo muhiim u ahaa halganka, iyagoo hoosta laga xariiqay baahida loo qabo in la horumariyo Jaaliyadda qeybaheeda kala duwan si loo gaadho hadafyadda la higsanayo.
Sidoo kale, xubnaha ayaa si dhameystiran ugu codeeyey inuu xilka maamulka Jaaliyadda sii hayo sanadka dhiman ee 2014, Md. Abdishakuur Xaaji madaama ballaadhin lagu sameeyey maamulka Jaaliyadda, taasoo saldhig u noqon doonta kor u qaadidda hawlaha gudaha dalka Norway laga fulinayo.
Gudoomiyihii hore Jaaliyadda Xaaji C/laahi ayaa isna ku dheeraaday fulinta qorshayaashii sanadka 2013-dii iyo hawl-qaybsigii xubnaha maamulka sameeyeen, middaas oo guul la taaban karo laga gaadhay ayuu yidhi Xaajigu.
Shirkan oo aad loogu riyaaqay qaban qaabadiisa iyo agaasinkiisa ba, ayaa wuxuu ku dhammaaday jawi farxad leh iyo rajo wanaag aad u sareysa oo laga qabo sanadka soo socda lagu billaabi doono wax qabad dhan walba ah.
Ugu dambeyntiina shirka ayaa lagu soo gabo gabeeyay cambaareyn balaadhan oo loo soo jeediyey gumeysiga Itoobiya, falalka xaq darrada ah ee ay kula kacayaan shacabka Soomaalida Ogaadeenya.